दिउसो प्रेमीसँग डेटिङ गएकी अस्मिता साँझ झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन्, किन लिइन् यस्तो निर्णय ? – Classic Khabar
सल्यानमा एक दुखद घटना घटेको छ । त्यहाँको शारदा नगरपालिका – १ श्रीनगर घर भएकी एक युवतीले असमयमै यो सन्सार छोडेकी छिन् । ती युवती १८ वर्षीय अस्मिता बुढा हुन् । उनले त्यस्तो गर्नु अघि घरमा नोट लेखेर छोडेकी थिइन् । उनका साथीहरुका अनुसार आफ्नो प्रेमिसँग खटपट भएपछि अस्मिताले यस्तो कदम चालेको हुनेसक्ने बताएका छन् ।
साँझ खाना खाएर कोठामा गएकी उनले घरको दलिनमा सलको पा सो लगाएर देह त्याग गरेको प्रहरीले जनाएको छ । घटना अनुसन्धानकै क्रममा रहेका ले थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले बताएको छ ।
परिवारले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अस्मिताका प्रेमी श्रीनगरकै छवि ओलीलाइ पक्राउ गरेको छ । अदालतबाट म्याद लिइ उनलाई प्रहरी हि रा स त मा राखेर अनुसन्धान भइरहेको सल्यान प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी गोविन्द थापाले जानकारी दिएका छन् । अस्मिता घरकी एक्ली सन्तान हुन् ।
अस्मिताका साथीहरुले दिएको जानकारी अनुुसार अस्मिता दुइवर्ष अघिदेखि श्रीनगरकै छवि ओलीसँग प्रेममा थिइन् । साउन २ गते शनिबार दिउँसो अस्मिता साथीहरुसँग घुम्न छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको शंकमुल गइन् । प्रेमी छवि पनि अस्मितालाइ भेट्न शंकमुल आए । त्यसपछि उनिहरु शंकमुल पार्कमा फोटो खिच्न र गफगाफमा व्यस्त भए ।
घरबाट घुम्ना जाँदा अस्मिताले साथीहरुसँग आफ्नो प्रेमीले आफुलाइ आजभोली वास्ता गर्न छोडेको, टाइम नदिएको र धो का दिन खोजिहरको बताएकी थिइन् । तर शंकमुलमा छविसँग भेट हुँदा र फर्किदाँ उनि खुसी भएको साथीहरु बताउँछन् ।
नोटमा अस्मिताले लेखेकी छन्, ‘ममी तिमीले भनेको ठिकै थियो, छविसँग लभ नगर भनेको तर म नसुनेर छविसँग लभ गरे, त्यसलाइ माया गरे तर मलाइ आज यो अवस्थामा लिएर छाड्यो ।’
Prevयि ५ महिनाकी बालिकाको के गल्ती थियो ? बुवाका भान्जाले उचालेर फाले तत्काल निधन